Halkeey ku dambeyn doontaa rajadii ahayd in Soomaaliya laga hirgaliyo imtixaan qaran? | Somalilandhorta
Browse: Home / Halkeey ku dambeyn doontaa rajadii ahayd in Soomaaliya laga hirgaliyo imtixaan qaran?
Posted by Yasmin Ahmed on May 15, 2019 in Warar | 7 Views | Leave a response
Image captionArdayda ka banaan baxaysay ku celinta imtixaankoodii dhexda u marayay
Tan iyo markii ay Wasaaradda Waxbarashadu ku dhawaaqday in la joojiyay isla markaana la baabi’iyay imtixaanka fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa waxa soo baxayay cabashooyin ku aadan sida Wasaaraddu u maaraysay arintaasi.
Boqolaal ardey ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka cabanayay joojinta imtixaanaadkii ay galayeen tan iyo Sabtidii la soo dhaafay.
Magaalada Baydhabo, maamulayaasha iskuulada sare ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin sida Wasaaradda Waxbarashada ee Federaalku u maaraysay arinta imtixaanadka fasalka 4-aad ee dugsiga sare iyo waliba in waxba kama jiraan laga so qaado natiijada maadooyinkii illaa hadda la galay.
Magaalada Beledweyne na, isu soo baxyo ay sameeyeen arday ka cabanaysay arintan ayaa la soo sheegayaa in rabshadihii ka dhashay ay ku dhaawacmeen labo qof oo midkood uu ahaa arday.
Maqaamka Muqdisho malagu owr-kacsadaa?
”Waxaa nasiib darro ah in qof hunguri ka raadiyo imtixaanka, iyadoo weliba bil Ramadaan lagu jiro, waxaa nasiib darro ah in waalidiintii qaar ka qayb galeen iibintii imtixaanaadkaas, waxaa nasiib darro ah in arday dedaalay uu soo dhinac fadhiisto mid isku hallaynaya inuu soo iibsaday imtixaankaas”, Waxaa sidaas yidhi wasiir Cabdillaahi Goodax Barre.
Sidoo kale wuxuu wasiirku sheegay in goobihii kale oo dhan uu caadi uga socday imtixaanka balse hal goob oo kali ah ay ku kacday falkan, isaga oo aan carrabaabin goobtaasi.
Sidoo kale wasiir Goodax ayaa sheegay, in imtixaanka dib loo qaadayo iyadoo si ka duwan sidii hore loo wajihi doono, maalmaha uu socdana baraha bulshada la xidhi doono.
Wasiirka ayaa ku dhawaaqay in imtixaanka dib loo qaadi doonaa 27-ka illaa 31-ka bishan.
Arrrintan ayaa dhaawac ku ah dawladda iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo muddooyinkii ugu danbeeyay dadaal ugu jirtey midaynta imtixaanaadka dalka.
Sidoo kale waxay arrintani niyad jab ku tahay shacabka Soomaaliyeed iyo hay’adaha dhaqaalaha ku bixiya joogtaynta imtixaankaas oo aan marnaba filayn in sidani dhici doonto.
Hadaba sidee ayaa loo xallin karaa arrintan?
Wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan, oo wareeysi la yeeshay Cabdillahi Maxamad Shirwac oo kamid ah mas’uuliyiinta ururrada bulshada rayidka ayaa sharraxaya sida loo xallin karo arrintan?
1: Marka hore waa in madaxda dawladda ay soo dhex-gashaa arrintan oo aysan u qaadan khalad ka dhacay wasaaradda waxbarashada.
2: Waxaa loo baahan yahay in ay si wadajir ah xal u gaaraan madaxda, wasaaradda, bahda waxbarashada oo kala duduwan oo ay ka mid yihiin waalidiinta, ardayda iyo dalladaha waxbarashada.
Rajadii ahayd in waddanka oo dhan uu galo imtixaan midaysan halkay ku dambeyn doontaa, arrintani dhaawac intee la’eg ayay u geeysan kartaa?
”Waxaa dhici karta in Puntland ay dhahdo ilaa aan hubinno nidaamka isku duba ridan kama qeyb galeyno imtixaanka qaran ee Soomaaliya, gar ayayna u yeelanayaan”, ayuu yiri Cabdillahi Maxamad Shirwac.
”Imtixaanki sannadkii horena dalladaha imtixaanaadka ayaa sheegay in wax isdaba marin la sameeyay sidaasi darteed rajadii laga lahaa in dalka oo dhan laga hirgaliyo imtixaan mideeysan way sii fogaaneysaa, waxa ayna ku dambeyn doontaa in dawlad goboleedyada iyo dalladaha waxbarashad ay isla maamuli doonaan”, ayuu intaasi ku sii daray Mr Shirwac.
Maamul goboleedka Puntland ayaa horay u diiday imtixaankan. Taasina waxay ka cadhaysiisay dawladda federaalka.
Fikradda ku saabsan in Imtixaan isku mid ah in laga qaado dugsiyada sare ee koonfurta iyo badhtamaha Soomaaliya waxay soo billaabatay sannadkii 2015-kii, iyadoo iskudayadii hore ay guul darraysteen dhammaantoo